Izithako Zokunakekelwa Kwabantu Abenzi & Abahlinzeki - China Okokunakekelwa Kwabantu Okuqukethwe Izithako Zethu
I-DL-Panthenol iyi-humectants enkulu, enefomu elimhlophe lempuphu, encibilikayo emanzini, utshwala, i-propylene glycol.I-DL-Panthenol yaziwa nangokuthi yi-Provitamin B5, edlala indima ebalulekile emzimbeni womuntu ophakathi. Ukuntuleka kweVithamini B5 kungaholela Izinkinga eziningi ze-dermatological.I-DL-Panthenol isetshenziswa cishe kuzo zonke izinhlobo zamalungiselelo okwenziwa kwezimonyo.I-DL-Panthenol inakekela izinwele, isikhumba nezinzipho. Esikhumbeni, i-DL-Panthenol iyisifutho esijulile sokungena. I-DL-Panthenol ingakhuthaza ukukhula kwe-epithelium futhi ine i ...
I-DL-Panthenol 50% iyi-humectants enhle, ayinalo uketshezi olunombala ophuzi ophuzi, oncibilikayo emanzini, utshwala, i-propylene glycol. I-DL-Panthenol yaziwa nangokuthi yi-Provitamin B5, edlala indima ebalulekile ekuguqulweni komzimba komuntu. I-Vitamin B5 ingaholela ekuphazamisekeni okuningi kwe-dermatological.I-DL-Panthenol isetshenziswa cishe kuzo zonke izinhlobo zamalungiselelo okwenziwa kwezimonyo.I-DL-Panthenol inakekela izinwele, isikhumba nezinzipho. Esikhumbeni, i-DL-Panthenol iyimisipha ejulile yokungena. indawo ...
I-DL-Panthenol 75% iyi-humectants enhle, ayinalo uketshezi olunombala ophuzi ophuzi, oncibilikayo emanzini, utshwala, i-propylene glycol. I-DL-Panthenol yaziwa nangokuthi yi-Provitamin B5, edlala indima ebalulekile emzimbeni womuntu wokulamula. I-Vitamin B5 ingaholela ekuphazamisekeni okuningi kwesikhumba. I-DL-Panthenol isetshenziswa cishe kuzo zonke izinhlobo zamalungiselelo okuzicwala. I-DL-Panthenol inakekela izinwele, isikhumba nezinzipho. Esikhunjeni, i-DL-Panthenol iyisifinyela esijulile sokungena. I-DL-Panthenol ingakhuthaza indawo ...
I-D-Panthenol inguketshezi olubukhali lwe-pantothenic acid futhi lwenzelwe ngokukhethekile ukusetshenziswa kwezingqangi.Incibilika kakhulu emanzini, incibilika kalula otshwaleni, incibilike ku-glycerol, incibilike kancane e-ether, ayincibiliki kumafutha emifino, uwoyela wamaminerali namafutha. Amapharamitha Wobuchwepheshe Osemqoka: Umazisi A Uvumelana ne-USP Identification B Uvumelana ne-USP Identification C Uvumelana ne-USP Ukubukeka okungenambala, i-Viscous and clear Assay Assay (Anhydrous basis) 98.0% ~ 102.0% Speci ...
I-D -Panthenol 75%
I-D-Panthenol 75% iyisithako se-viscous liquid se-pantothenic acid futhi senzelwe ngokukhethekile ukusetshenziswa kwe-topical.Incibilika kakhulu emanzini, incibilika kalula otshwaleni, incibilike ku-glycerol, incibilike kancane ku-ether, ayincibiliki kumafutha emifino, uwoyela wamaminerali namafutha . Amapharamitha Wobuchwepheshe Osemqoka: Ukubukeka Kokuhlonza Okungenambala, Okubukekayo futhi okucacile Kokukhonjwa okusetshenziswayo kwe-Assay (HPLC) 75.0 ~ 78.5% Amanzi (uKarl Fischer) Angadluli ku-0.1% Ukujikisa Okucacile Okukhethekile + 29 ° ~ + 31.5 ° Am ...
I-D-Calcium Pantothenate ingusawoti we-calcium wevithamini B5 encibilikiswa ngamanzi, etholakala kuyo yonke indawo ezitshalweni nasezicutshini zezilwane ezinempahla ye-antioxidant. I-Pentothenate iyingxenye yeCoenzyme A kanye nengxenye ye-Vitamin B2. I-Vitamin B5 iyinto yokukhula futhi ibalulekile emisebenzini ehlukahlukene ye-metabolic, kufaka phakathi imetabolism yama-carbohydrate, amaprotheni nama-fatty acids. Le vithamini ibandakanyeka ekwakhiweni kwama-cholesterol lipids, ama-neurotransmitters, ama-hormone e-steroid, ne-hemoglo ...
I-Ascorbyl Tetraisopalmitate, ebizwa nangokuthi yi-Tetrahexyldecy Ascorbate, iyimolekyuli etholakala ku-vitamin C kanye ne-isopalmitic acid. Imiphumela yomkhiqizo iyefana naleyo ka-vitamin C, okubaluleke kakhulu ukuthi iyakwazi ukusebenza njenge-antioxidant. I-Ascorbyl Tetraisopalmitate inciphisa ukukhiqizwa kwama-oxidizing agents, afaka isandla ekulimaleni kwamaseli ngemuva kokuchayeka ku-UV noma izingozi zamakhemikhali. Futhi, isikhalazo sokubukwa kwesikhumba ...
IBiotin ebizwa nangokuthi yi-D-Biotin, Vitamin H, Vitamin B7, imhlophe noma icishe ibe mhlophe, i-crystaline powder noma amakristalu angenambala, ancibilika kancane emanzini, utshwala, awunakunyibilika ku-acetone.Incibilika ngezixazululo ze-Alkali Hydroxides. Amapharamitha Okhiye Wobuchwepheshe Ukubukeka Okumhlophe noma oku-off-white powder Identification (A, B, C) kuvumelana ne-USP Assay 97.5% ~ 100.5% Ukungcola Ukungcola Ngabanye: kungabi ngaphezu kuka-1.0% Ingcola Yonke: kungabi ngaphezu kuka-2.0% Ukuzungezisa Okucacile + 89 ° ~ + 93 ° Resi ...
ICoenzyme Q10 ibandakanyekile njengengxenye ye-mitochondria ekukhiqizweni kwamandla kwamaseli. Ibuye ibe nomphumela wokulwa ne-antioxidant, osetshenziswa kakhulu kwi-physiology, ekhemisi, izimonyo nokuvikelwa kwezempilo.Yimpuphu ephuzi noma ekhanyayo ephuzi ye-crystal, ayinaphunga, ayinambitheki, encibilika kalula ku-chloroform, i-benzene ne-carbon tetrachloride; encibilikayo e-acetone, aether, petroleum ehter; encibilika kancane ku-ethanol; ayinamanzi emanzini noma i-methanol.Izobola ibe yizinto ezibomvu ekukhanyeni, ekuqineni ...
IMagnesium Ascorbyl Phosphate is a solid solid derivatives C (L-Ascorbic acid mono-dihydrogen phosphate magnesium salt) engadicileli phansi amafomula aqukethe amanzi. Emikhiqizweni yokunakekelwa kwesikhumba, iMagnesium Ascorbyl Phosphate isetshenziselwa ukuvikela nokulungisa i-UV, ukukhiqizwa kwe-collagen, ukukhanyisa isikhumba nokukhanya, futhi njenge-anti -infigueatory.Ibuye ibe ne-antioxidant enamandla.Ibhekwa njenge-ejenti yokugcoba ye-sakin engacasuli enhle kakhulu evimbela amangqamuzana esikhumba ukukhiqiza i-melanin nokukhanya ...
Isodium Ascorbyl Phosphate esuselwe ku-vitamin C, uvithamini C usekelwe kusayensi nobuchwepheshe besimanje bokucubungula izinto zokusetshenziswa ezenziwe ngokusebenzisa lo mkhiqizo, kungaba ngomlomo noma ngomunca esikhunjeni emzimbeni, kungagaywa ngokushesha yi-phosphatase ukukhulula uvithamini C, uvithamini C idlala imisebenzi eyingqayizivele yomzimba neyezinto eziphilayo.I-sodium Phosphate Vitamin C Vitamin C inakho konke ukusebenza kwazo zombili. UVitamin C uphinde anqobe ukuzwela ekukhanyeni, ukushisa nensimbi ion, sh ...
I-Kojic Acid yaziwa njenge-5- hydroxyl -2- hydroxymethyl -1 ne-4- piranone. Iyinhlanganisela ebuthaka ye-asidi ene-organic eyenziwe ngokuvutshelwa kwama-microorganisms.I-acid tramperic acid iyinaliti emhlophe noma ephuzi efana nekristalu; incibilika kalula emanzini, utshwala ne-acetone, incibilike kancane ku-ether, i-ethyl acetate, i-chloroform ne-pyridine, engancibiliki nge-benzene; ifomula yayo yamangqamuzana yi-C6H6O4, isisindo samangqamuzana142.1, iphuzu lokuncibilika153 ～ 156 ℃. Amapharamitha Okhiye Wobuchwepheshe Ukubukeka Okumhlophe noma ukuvala i-crystal emhlophe Njengo ...